आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (३१ वैशाख २०७९ शनिबार, १४ मे २०२२) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (३१ वैशाख २०७९ शनिबार, १४ मे २०२२)
३१ बैशाख २०७९, शनिबार ००:१२
श्रीशाके १९४४ नेपाल सं. ११४२ वसन्त ऋतु नलनामक संवत्सर वि.सं. २०७९ वैशाख ३१ गते तद् अनुसार सन् २०२२ मे १४ तारिख शनिबार वैशाख शुक्लपक्षको त्रयोदशी तिथि चित्रा नक्षत्र सिद्ध योग गर करण आनन्दादिमा काण योग चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः१८ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः४४ मा हुनेछ । नृसिंहजयन्ती ।
मेष – आज विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् । सहयोगीहरूको साथ पाइनाले अप्ठ्यारा कामहरु पनि सजिलै पुरा हुनेछन । व्यापार(व्यवसायमा फाइदा होला । दाम्पत्य सुख बढ्नेछ । रचनात्मक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । प्रयासरत काम बन्नेछ । ऋण, रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । साहसिक कार्यमा रुचि बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक र कार्य बन्नेछ । ख्याति फैलिनेछ ।
वृष – आज केही अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला । विवादमा परिनुका साथै सहयोगीहरू प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिन सक्छन् । बोल्दा विचार पुर्याउनुहोला । यसका बाबजुद सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्नेछ, गरेका कामको प्रशंसा हुनेछ । उन्नति हुनेछ । व्यस्तता बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण रहला । कर्म वृद्धि हुनेछ । लगानी उठ्नेछ ।
मिथुन – प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । आँटेका काम बिस्तारै भए पनि सम्पन्न हुनेछन् । तथापि, आफन्तहरू टाढिनेछन् भने सहयोगीहरूले समेत साथ छाड्ने देखिन्छ । पहिलेका कमजोरीलाई भने सुधार गर्न सकिनेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । परिवारिक काममा सफलता मिल्नेछ । गौरव वृद्धि हुनेछ । ऋण, रोग र शत्रुसितको कुरामा अनुकूलता आउनेछ ।
कर्कट – भागदौड बढ्ने छ भने आज रसरागको कार्यमा प्रयासरत रहनुहुनेछ । मान सम्मान र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । राजनीति र नोकरीमा पनि प्रसिद्धि बढ्ला । आम्दानी बढ्ने समय छ । मनोरञ्जनपूर्ण क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइएला । बल विवेकले काम बन्नेछ । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । आँट उत्साह बढ्नेछ ।
सिंह – धन वृद्धि हुनेछ । मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ । दिगो फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ, साथै रोकिएका काम बन्नेछन् । काम बने पनि जिम्मेवारी थपिन सक्छ । हासविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । यात्रा होला ।
कन्या – स्वास्थ्यप्रति सावधान रहनु होला । स्वास्थ्य कमजोर रहे पनि काममा परिस्थितिले साथ दिनेछ । धन वृद्धि हुनेछ । काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यस्तता बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा लाग्नु बेस हुनेछ र सफलता पनि मिल्नेछ । सन्तानको सहयोग मिल्नेछ ।
तुला – आरोग्य वृद्धि हुनेछ । पारिवारिक सुख शान्ति समृद्धि बढ्नेछन् । व्यवसायबाट राम्रो फाइदा हुनेछ । आँटेका काम पुरा हुनेछन् । टाढाका शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् । कामको सन्दर्भमा उच्च व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ । काममा अलिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ला । केही चुनौतीसमेत देखापर्ने छन् । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । अरुसित मिलेर काम गर्नु बेस रहला तर अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन ।
वृश्चिक – आजको दिन लाभदायक देखिन्छ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्न सकिने छ । व्यावसायिक काममा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ । बल बढ्ला, लगानी उठ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखनप्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ ।
धनु – व्यवसायबाट सोचेको लाभ मिल्नेछ । अरूको मन जितेर अवसर हात पार्न सकिने छ । व्यावसायिक कामका लागि यात्राको सम्भावना छ । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । शैक्षिक र बौद्धिक काम बन्नेछ । मित्रजनको सहयोग मिल्नेछ । धन मान महत्व बढ्ला । रसराग गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ ।
मकर – आज खर्च र लगानी बढ्ला । घरायसी समस्याले पनि सताउने छ । आकस्मिक खर्च बढ्नेछ । अर्थ अभावले बन्न लागेको काम स्थगित हुने देखिन्छ । झमेला, विवाद र चोटपटकको योग छ । धोखा हुने ठगिने सम्भावना रहनेछ । सोचीविचारी काम गर्नु अनुकुल रहनेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुपर्नेछ ।
कुम्भ – आजको दिन त्यत्ति लाभकारी देखिन्न । पैसाको अभावले काम रोकिन सक्छ । आश्वासन दिनेहरूले झुक्याउन सक्छन् । भोतिक साधनको क्षति हुने समय छ । तथापि, मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ ।
मीन – आय वृद्धि होला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । दिगो आम्दानी हुने काम सुरु गर्न सकिनेछ । यात्राको योग छ । श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ । लगनशीलताले काममा उत्साह जगाउनेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । गौरवमा बढोत्तरी हुनेछ । हांसविलासमा आकर्षण बढ्ला । आरोग्यता बढ्नेछ ।